Fahamka Galmada Iyo Bulshada Somalida.. - iftineducation.com
Fahamka Galmada Iyo Bulshada Somalida..
iftineducation.com – Galmadu waxay hoos tagtaa cilmiga guurka, maado ahaanna waxaa lagu sifeeyaa ama lagu tilmaamaa unugyada waaweyn ee tiirka iyo udub dhexaadka guurka u ah. Kolka la qeexayo lana dhiraan dhirinayo erey afeedka, muran iyo qalalaase badan kama taagna. dhibaatadu waxay imaanaysaa kolka labada erey si cilmiya loo macnaynayo, hadaan la imaado tusaale, maxaa guur ah amase guur dhihi karnaa? Maxaase galmo ah amase la dhihi karaa waa galmo? Ka jawaabidda su’aalahaasi maahan mid fudud oo si yar looga gayoon karo. Kolka laga yimaado in labaduba heshiis ay yihiin – haddii kale waa khasab iyo kufsiyee – waxaan aragti ahaan qabaa labo qof oo kala jinsiya, heshiiska dhexmara ayaan u aqaanaa guur, eegga sidaas aan u fasiro, waxaa tagaysa aragti kale oo dhahda labadii qof oo isku jinsiya, sida labo wiil ama labo gabdhood; aragtidan waxaa qaba oo had iyo jeer faafiya reer galbeedka, ururadooda xuquuqda aadanaha u dooda.
Labo jinsi oo kala duwan xidhiidhka dhexmara ayaan u aqaan guur; kuwa isku jinsiga ah xidhiidhkooda waxaan u aqaan luudnimo; si lamida, kuwa kala jinsiga xidhiidhkooda aan ku dhisnayn xalaasha waxaan u aqaan zinno. Eegga fahaahiimtaas aynu fahamno waxaynu ogaanaynaa, bulsho walba oo adduunka ku nool inay leedahay labo tiir oo ay ku dhisantahay, tiirarka diinta iyo dhaqanka. Labadaas, raad wayn iyo saamayn badan ayay ku leeyihiin guurka. Bulshada Soomaaliyeed oo aan ka duwanayn kuwa caalamka ku nool, dhaqankeeda guurka iyo galmadu waa ka gedisan yahay kuwo kale. Inbadan xeeldheerayaasha culuumta bulshada gaar ahaan maadadan weyn, kolkay qeexayaan wax badan kuma kala duwana feker ahaan, waxaan se anigu dhihi karaa ama u qeexi karaa sidan: “Galmadu waa qaabab iyo farsamooyin aadanuhu adeegsado marxaladda ay isku tagayaan ama isa saaranayaan, si labada ruux ay u baahi-baxaan oo shahwadda ku jirta ay isku dhaafsadaan, dabadeed nafis maskaxeed iyo raaxo jidheed helaan”
Jaceyl galmo la’aan iyo nin gus yar naagtada ma jeclo ee ninyahow